Tolo-tanana Faritra Diana | Primature
Tolo-tanana Faritra Diana
7 avril 2018 12 avril 2018
Anosy, 07 Aprily 2018 – Manoloana ny fahavoazana nateraky ny rivo-doza “Eliakim” dia nanatanteraka hetsika tolo-tanana ny 5 hatramin’ny 07 aprily teny amin’ny tranombokim-pirenena ny fikambanan’ireo mponina avy any amin’iny faritr’i Diana iny.
Nidina teny an-toerana ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, nandray anjara tamin’izany hetsika izany, amin’ny maha-olom-pirenena sy amin’ny maha-zanaky ny faritra Avaratra azy, adidy ho fanohanana ireo mpiray tanindrazana tratry ny fahasahiranana.
Ravan’ny rivo-doza ny 65% n’ireo distrika 4 amin’ny Faritra Diana ka ny tao Ambilobe no tena be tra-boina indrindra. Maty ny biby fiompy, simba ny tanimbary, 4380 ny mpianatra mbola tsy afaka miverina mianatra nohon’ny fahasimban’ny tranom-panjakàna izay tsy azo ampiasaina, 116 ny trano fonenana tratry ny tondra-drano ka maro ireo mponina mbola tsy afaka miverina amin’ny trano fonenany, ary 12 ny aina nafoy.
Nanambara ny solon-tenan’ny faritra Avaratra fa hita tokoa ny firaisankina eo amin’ny samy Malagasy nandritra ny hetsika, ary naneho fisaorana ho an’ny Lehiben’ny Governemanta. Ho an’ireo izay tsy afaka nitondra fanampiana teny an-toerana dia mbola mitohy hatramin’ny zoma 13 aprily ho avy izao ny fandraisana izany, amin’ny alalan’ireo tambazotra finday fikiràna vola sy ny banky eto an-toerana.
← Lanonam-pamoahana ny andiany “Ainga” teny anivon’ny Sekoly ambony fampiofanana mpiasam-panjakana na ENAM
Fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny Atrikasa hijerena paikady mahomby sy maharitra mahakasika ny tsy fandriampahalemana →